Mayelana NATHI - TSINFA
Ulapha: Ikhaya1 / Mayelana NATHI
I-Shandong TSINFA CNC Equipment Co., Ltd. yasungulwa ngo-2000, imikhiqizo yokuqala yokugaya ejwayelekile yenkampani yokuqala imikhiqizo, ekwakhiweni kwemisha eqhubekayo, ngocwaningo oluzimele nokukhiqizwa kwentuthuko, ukusebenza komkhiqizo nezinye izindlela zokwandisa umugqa womkhiqizo . Imikhiqizo imboza ukusika kwensimbi nensimbi okwakha izinhlobo ezimbili, ukucacisa i-CNC cylindrical grinder, ubuso be-cylindrical grinder, i-CNC lathe, i-cnc ezintathu-axis machining centre, umshini we-axis we-CNC wokugaya umshini, umshini we-radial drilling, umbhede we-CNC, i-shaper, i-lathe ejwayelekile, i-milling universal umshini, umshini wokugaya, umshini wokubacindezela. Imikhiqizo ithengiswa kabanzi ezimakethe zasekhaya nezamazwe omhlaba.
Eminyakeni yamuva nje, inkampani igxile ekukhiqizeni okuphezulu nasekuthengiseni amathuluzi womshini we-CNC, imishini kanye nokwakhiwa kwemishini nentuthuko. Kuthuthukiswe uchungechunge lwe-TFA lokugaya imoto nokuthinta isikhungo sokujika esiyinhlanganisela, uchungechunge lwe-BK lombhede we-axis amane we-CNC, ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende zokucubungula kahle. Inani lethu nenhloso yethu ukwakha umklamo ongabizi kakhulu wabasebenzisi namakhasimende, ukwenza ngcono umkhiqizo namabhizinisi ngokuqamba kanye nensizakalo emisha.
Izinkampani zilandela ubuqotho bekhwalithi, ukuqinisekisa ukuthi imishini ngayinye ifanelekile efemini, ukuqinisekisa ukuthi zingenza konke okusemandleni abasebenzi kanye namakhasimende.
Singanikezela ngamathuluzi omshini afaka:
Metal ukwakha umshini
Band Sawing umshini
CNC Kuqondile Lathe,
Osabalalayo Drilling Machine,
Isikhungo seGantry Machining,
Umshini Wokugaya Wendawo Yonke njalonjalo.
Unolwazi lokuqongelela nokukhula kweminyaka eminingi, sesivele saba ngabaphakeli abavuthiwe bamathuluzi omshini nezixazululo zamakhasimende ethu, ikhwalithi yathuthukiswa ngokuqhubekayo, imiqondo yokuklama nokucubungula ubuchwepheshe kuthuthukile futhi.
Ngokunwetshwa kwesikali sokukhiqiza, sithuthukise noma sathenga imishini eminingi yokunemba okuphezulu kufaka phakathi umshini omkhulu wokugaya phansi / isidina, umshini wokugaya ophakeme kakhulu, umshini wokugaya ikhanda oyisishiyagalolunye nokunye, ngenkathi uhlangabezana nezidingo zethu, ukusebenza kahle kokukhiqiza kunwetshiwe.
Kusetshenziswe ngomshini omkhulu wokugaya phansi / umshini wesicefe, kusenza sikwazi ukukhiqiza umshini omkhulu we-CNC oqondile kanye nomshini omkhulu wokugaya we-longmen.
Umshini omkhulu wokugaya isitimela se-high-Precision umhlahlandlela wesitimela usetshenziselwa ukugaya isitimela somhlahlandlela wombhede, gcina ukucacisa okuphezulu.
Isetshenziswa umshini wokugaya ikhanda wesishiyagalolunye, ithuthukisa ukusebenza kahle kokukhiqizwa kombhede ovundlile wesikebhe kakhulu, uma usukhipha, ngemuva komshini omkhulu wokugaya ujantshi wesitimela wokuqeda umshini.
Umshini okhethekile wokucubungula ibhokisi lekhanda le-lathe, yenza ibhokisi lekhanda lishaywe kanye kanye, ukusebenza kahle kokukhiqiza kukhuphuke kakhulu.
Imishini yokuhlola ikhwalithi:
sitshale imali eningi ukuthenga imishini yokuhlola ikhwalithi esezingeni lomhlaba, efana nengalo yokulinganisa, ibhalansi enamandla, i-Renishaw laser interferometer, njll., qiniseka ukuthi ithuluzi ngalinye lomshini lihlolwe ngokuqinile.